Madaxweyne Lafta gareen oo gaaray Degmada Xudur – Hornafrik Media Network
Madaxweyne Lafta gareen oo gaaray Degmada Xudur
Qaramada midoobey oo war xasaasi ah ka soo saartay Soomaaliya.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta waxaa lagu arkay dhagxaan iyo caro tuur la dhigay qaar ka mid ah wadooyinka waa weyn ee Magaaladaasi. Meelaha inta badan lagu arkayo ayaa waxaa ka mid ah goobta uu ka socdo shirka dib u heshiisiinta beelaha dega Galmudug, madaxtooyada Maamulka iyo wadooyinka muhiim ah oo ay isticmaalaan madaxda dowladda iyo kuwa galmudug. Goobaha kale ee maanta la xiray ayaa waxaa ka mid ah meelaha ay inta badan ku caweeyaan dadka shacabka ah ee ku nool Magaalada Dhuusamareeb. Sababta loo dhigay Dhagaxaan iyo Caro turka ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay si loo adkeeyo amaaanka Magalada dhuusamareeb ee Gobalka Galgaduud. Ciidamada amaanka ayaa dadka u diidaya in ay gaadiid ku maraan goobaha la xiray, iyadoona arintan ay walaac xoog leh ay ka muujinayaan shacabka ku nool Magaaladaasi. Waa markii ugu horeysay oo dhagaxaan iyo caro tuur lagu sameeyo magaalada Dhuusamareeb ee Gobalka Galgaduud tan iyo markii ay dowladda Soomaaliya la wareegtay amnigga Magaaladaasi. Magaalada Dhuusamareeb ayaa haatan waxaa ka soconaya shirka dib heshiisiinta beelaha dega Galmudug